NextMapping | Ny ho avin'ny asa
Ahoana ny NextMapping™ mamorona ny ho avin'ny asa
NextMapping ™ dia mifantoka amin'ny hoavin'ny asa ary koa ny dingana manaraka. Ny mpanjifantsika voahaja dia mampiasa azy io handrafetana ny herinandro ho avy, na ny taona manaraka, na ny folo taona ho avy.
Ny dingana NextMapping ™ dia manome toe-javatra hanampiana ny mpanjifa hahavita fivoarana mahavariana ary koa fiovana maharitra amin'ny toeram-piasana ilaina ho vonona amin'ny ho avy.
NextMapping ™ dia ho lasa modely manokana momba ny fanapaha-kevitry ny asa izay miteraka fahazavana miaraka amin'ny dingana azo atao amin'ny fiantraikany haingana sy maharitra ho an'ny mpanjifa / mpiasa ary amin'ny farany izao tontolo izao.
Inona no atao hoe NextMapping™ dingana?
Ny raharaham-barotra tsirairay dia manana fanamby sy fahafahana miavaka.
Manamboarana sy mamolavola NextMapping™ ho anao, izahay dia mifandray aminao voalohany sy ny ekipanao - ary manao ny fikarohana savaranonando anay manokana - mba hahafantarana ny 'fanjakana misy anao' ankehitriny.
Fanamby iraisan'ny mpitarika sy ny ekipa ny fahitana ny orinasany amin'ny alàlan'ny solomaso na fomba fijery tokana. Mba hametrahana fomba fijery holistic kokoa, dia manapa-kevitra izahay ary mampahafantatra anao sy ny ekipanao ny fikambanana - avy amin'ny mason-tsivana 'fomba fijery marobe' amin'ny hoavin'ny asa.
Miaraka amin'ny fahatakarana miaraka momba ny fandaminana dia manontany isika hoe: "Ahoana ny fanaovana sarintany amin'ny faritany?" vonona amin'ny ho avy ankehitriny.
Noforonina miaraka amin'ny rafi-pandrafetana momba ny ho avin'ny asa, dia manangona ny valinteninao izahay. Amin'ny alàlan'ny fitsapan-kevitra mivantana, ny dinidinika sy resaka dia raisinay ny angon-drakitra nangonina avy aminao sy ny ekipanao ary manaratsy ny valin-kevitra miaraka.
Aorian'ny fakànana ny lesona sy ny hevitra manadihady dia atsipatsika ny dikan'ny fikambananay. Mampifandray ireo teboka ireo izahay, manazava mazava tsara ny fahitana sy ny sarintany misy anao amin'ny ho avin'ny asa.
Noforoninay ny hoavin'ny sarintany misy anao - tonga izao ny fotoana fampiharana. Ny dingana farany amin'ny NextMapping™ dia ny famelabelarana ireo fepetra azo atao eo amin'ny fikambananay mba hahatongavan'ity fahitana ity.